တာချီလိတ် - မယ်ဆိုင် (၉၂)ကြိမ်မြောက် TBC အစည်းအဝေး မယ်ဆိုင်မြို့တွင် ကျင်းပ | ❃ Tachileik News Agency ❃ www.tachileik.net
တာချီလိတ် - မယ်ဆိုင် (၉၂)ကြိမ်မြောက် TBC အစည်းအဝေး မယ်ဆိုင်မြို့တွင် ကျင်းပ
တာချီလိတ် - မယ်ဆိုင် . မြန်မာ - ထိုင်း မြို့နယ်အဆင့်နယ်ခြားကော်မတီ(TBC)၏ (၉၂)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးအား ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဆိုင်မြို့ရှိ ဘန့်နမ့်ရီဆော့ဒ်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ရာ မြန်မာဘက်မှ (၂၅)ဦးနှင့် ထိုင်းဘက်မှ (၄၂)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ မြန်မာဘက် TBC ဥက္ကဌ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ရန်ကြီးအောင် နှင့် အဖွဲ့ဝင် (၅)ဦး အပြင် လေ့လာသူအဖြစ် တာချီလိတ်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတင်ဝင်းရွှေ အပါအ၀င် (၂၀)ဦး တက်ရောက် လာခဲ့ကြပြီး၊ ထိုင်းဘက် TBC ဥက္ကဌ ဗိုလ်မှူးကြီး ကီတားကွမ်းကျန်းထရား အပါအ၀င် အဖွဲ့ဝင် (၄၂)ဦးတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြကာ နယ်စပ်ရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါး ပူးပေါင်းနှိမ်နင်းမှု ကိစ္စရပ်များအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
အစည်းအဝေးတွင် နယ်စပ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ တာချီလိတ် - မယ်ဆိုင်အကြားရှိ မယ်ဆိုင်ချောင်း ကိစ္စများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စရပ်များ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးပူးပေါင်းကာကွယ် နှိမ်နှင်းရေးတွင် ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် နှစ်ဖက်တရားခံများ ဖမ်းဆီးရမိမှု အခြေအနေများ စသည်တို့ကို အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး မေးမြန်းဖြေကြားခဲ့ကြသည်။
ဆွေးနွေးမှုများအပြီးတွင် မြို့နယ်အဆင့် နယ်ခြားကော်မတီ(TBC)မြန်မာဘက်မှ ဥက္ကဌ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ရန်ကြီးအောင်က "ယခု အစည်းအဝေး ဆွေးနွေးချက်များထဲမှ မိမိတို့ မြို့နယ်အဆင့် နယ်ခြားကော်မတီ(တာချီလိတ်) အနေဖြင့် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်သော ကိစ္စရပ်များအား ဖြေရှင်း ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး၊ မိမိတို့အနေဖြင့် မဖြေရှင်းနိုင်သောကိစ္စရပ်များအား အထက်ဌာန အဆင့်ဆင့်သို့ ဆက်လက်တင်ပြကာ အကြောင်း ပြန်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်တစ်လျှောက် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အခြေအနေ အရပ်ရပ်များကို စိတ်ရင်း စေတနာအမှန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြလို့ လက်ရှိ အချိန်တွင် နယ်စပ်တစ်လျှောက် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် လက်နက်/ခဲယမ်းရောင်းဝယ်ခြင်းများ၊ နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုခင်းကျူးလွန်ခြင်းများနှင့် အခြားဥပဒေပြင်ပ လုပ်ငန်းများကို တားဆီးနှိမ်နှင်းနိုင်ခဲ့သဖြင့် ယခင်ကာလများထက် တစ်ဖြည်းဖြည်း လျော့နည်း လာတာကိုလည်း အထင်အရှားတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ကြောင်း" နိဂုံးချုပ်အမှာစကား ပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် မြို့နယ်အဆင့်နယ်ခြားကော်မတီ(TBC)ထိုင်းဘက်မှ ဥက္ကဌ ဗိုလ်မှူးကြီး ကီတားကွမ်းကျန်း ထရားမှ" လက်ရှိအနေအထားအရ နှစ်ဖက် အပြန်အလှန် ဆက်ဆံရေးသည် အလွန် ကောင်းမွန်သည့် အနေအထားတွင် ရှိနေပြီး ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပြဿနာရပ်များကိုလည်း ကောင်းမွန်စွာ အတူပူးပေါင်း ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ အပြန်အလှန် ဖလှယ်ခြင်းဖြင့် ပြဿနာများကို ပိုမို ကောင်းမွန်စွာ ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည့် အတွက်လည်း ဒေသအဆင့် အောင်မြင်မှု အသီးသီး ရရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း" နိဂုံးချုပ်အမှာစကား ပြောကြားသည်။
မြန်မာ - ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံ မြို့နယ်အဆင့် နယ်ခြားကော်မတီအား တာချီလိတ် နှင့် မယ်ဆိုင်တို့တွင် အလှည့်ကျကျင်းပလေ့ရှိရာ (၉၂)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးသည် ထိုင်းဘက် အလှည့်ကျအနေဖြင့် မယ်ဆိုင်မြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
Photo : Nathi Somkat
တာခြီလိတျ - မယျဆိုငျ . မွနျမာ - ထိုငျး မွို့နယျအဆငျ့နယျခွားကျောမတီ(TBC)၏ (၉၂)ကွိမျမွောကျ အစညျးအဝေးအား ထိုငျးနိုငျငံ မယျဆိုငျမွို့ရှိ ဘနျ့နမျ့ရီဆော့ဒျတှငျ ကငျြးပပွုလုပျရာ မွနျမာဘကျမှ (၂၅)ဦးနှငျ့ ထိုငျးဘကျမှ (၄၂)ဦး တကျရောကျခဲ့ကွကွောငျး သိရသညျ။
အဆိုပါ အစညျးအဝေးသို့ မွနျမာဘကျ TBC ဥက်ကဌ ဒုတိယဗိုလျမှူးကွီး ရနျကွီးအောငျ နှငျ့ အဖှဲ့ဝငျ (၅)ဦး အပွငျ လလေ့ာသူအဖွဈ တာခြီလိတျခရိုငျအုပျခြုပျရေးမှူး ဦးတငျဝငျးရှေ အပါအဝငျ (၂၀)ဦး တကျရောကျ လာခဲ့ကွပွီး၊ ထိုငျးဘကျ TBC ဥက်ကဌ ဗိုလျမှူးကွီး ကီတားကှမျးကနျြးထရား အပါအဝငျ အဖှဲ့ဝငျ (၄၂)ဦးတို့ တကျရောကျခဲ့ကွကာ နယျစပျရေးရာကိစ်စရပျမြားနှငျ့ မူးယဈဆေးဝါး ပူးပေါငျးနှိမျနငျးမှု ကိစ်စရပျမြားအား ဆှေးနှေးခဲ့ကွကွောငျး သိရသညျ။
အစညျးအဝေးတှငျ နယျစပျလုံခွုံရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြား၊ တာခြီလိတျ - မယျဆိုငျအကွားရှိ မယျဆိုငျခြောငျး ကိစ်စမြား၊ သဘာဝပတျဝနျးကငျြထိနျးသိမျးရေးကိစ်စရပျမြား၊ မူးယဈဆေးဝါးပူးပေါငျးကာကှယျ နှိမျနှငျးရေးတှငျ ဆောငျရှကျနမှေုမြားနှငျ့ နှဈဖကျတရားခံမြား ဖမျးဆီးရမိမှု အခွအေနမြေား စသညျတို့ကို အပွနျအလှနျဆှေးနှေး မေးမွနျးဖွကွေားခဲ့ကွသညျ။
ဆှေးနှေးမှုမြားအပွီးတှငျ မွို့နယျအဆငျ့ နယျခွားကျောမတီ(TBC)မွနျမာဘကျမှ ဥက်ကဌ ဒုတိယဗိုလျမှူးကွီး ရနျကွီးအောငျက "ယခု အစညျးအဝေး ဆှေးနှေးခကျြမြားထဲမှ မိမိတို့ မွို့နယျအဆငျ့ နယျခွားကျောမတီ(တာခြီလိတျ) အနဖွငျေ့ ဖွရှေငျးဆောငျရှကျနိုငျသော ကိစ်စရပျမြားအား ဖွရှေငျး ပေးသှားမှာဖွဈပွီး၊ မိမိတို့အနဖွငျေ့ မဖွရှေငျးနိုငျသောကိစ်စရပျမြားအား အထကျဌာန အဆငျ့ဆငျ့သို့ ဆကျလကျတငျပွကာ အကွောငျး ပွနျကွားပေးသှားမှာဖွဈကွောငျး၊ နှဈနိုငျငံ နယျစပျတဈလြှောကျ ဖွဈပျေါနသေညျ့ အခွအေနေ အရပျရပျမြားကို စိတျရငျး စတေနာအမှနျဖွငျ့ ဆောငျရှကျခဲ့ကွလို့ လကျရှိ အခြိနျတှငျ နယျစပျတဈလြှောကျ မူးယဈဆေးဝါးနှငျ့ လကျနကျ/ခဲယမျးရောငျးဝယျခွငျးမြား၊ နိုငျငံဖွတျကြျောမှုခငျးကြူးလှနျခွငျးမြားနှငျ့ အခွားဥပဒပွငျေပ လုပျငနျးမြားကို တားဆီးနှိမျနှငျးနိုငျခဲ့သဖွငျ့ ယခငျကာလမြားထကျ တဈဖွညျးဖွညျး လြော့နညျး လာတာကိုလညျး အထငျအရှားတှမွေ့ငျရမှာဖွဈကွောငျး" နိဂုံးခြုပျအမှာစကား ပွောကွားသညျ။
ယငျးနောကျ မွို့နယျအဆငျ့နယျခွားကျောမတီ(TBC)ထိုငျးဘကျမှ ဥက်ကဌ ဗိုလျမှူးကွီး ကီတားကှမျးကနျြး ထရားမှ" လကျရှိအနအေထားအရ နှဈဖကျ အပွနျအလှနျ ဆကျဆံရေးသညျ အလှနျ ကောငျးမှနျသညျ့ အနအေထားတှငျ ရှိနပွေီး ဖွဈပျေါလာသညျ့ ပွဿနာရပျမြားကိုလညျး ကောငျးမှနျစှာ အတူပူးပေါငျး ဖွရှေငျးနိုငျခဲ့ကွောငျး၊ သတငျးအခကျြအလကျမြား အပွနျအလှနျ ဖလှယျခွငျးဖွငျ့ ပွဿနာမြားကို ပိုမို ကောငျးမှနျစှာ ဖွရှေငျးနိုငျခဲ့သညျ့ အတှကျလညျး ဒသေအဆငျ့ အောငျမွငျမှု အသီးသီး ရရှိနသေညျကို တှရှေိ့ရကွောငျး" နိဂုံးခြုပျအမှာစကား ပွောကွားသညျ။
မွနျမာ - ထိုငျး နှဈနိုငျငံ မွို့နယျအဆငျ့ နယျခွားကျောမတီအား တာခြီလိတျ နှငျ့ မယျဆိုငျတို့တှငျ အလှညျ့ကကြငျြးပလရှေိ့ရာ (၉၂)ကွိမျမွောကျ အစညျးအဝေးသညျ ထိုငျးဘကျ အလှညျ့ကအြနဖွငျေ့ မယျဆိုငျမွို့တှငျ ကငျြးပပွုလုပျခွငျး ဖွဈကွောငျး သိရှိရသညျ။